Nhanho Nyowani Dzakatorwa KuCoronavirus MuMutengo | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraNhanho Nyowani Dzakatorwa dzeCoronary Virus muRuzivo
18 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, PHOTOS, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, TURKEY
Matanho matsva anotorwa e coronavirus muguta guru
Ankara Metropolitan Municipality yave kungwaririra nezvikamu zvayo zvese mukati merutivi rwekurwisa coronavirus. Nekuraira kweMetropolitan Meya Mansur Yavas, sarudzo itsva dzekudzivirira dzakaunzwa. Mari yekurenda yakatambirwa kubva kumabhizinesi aive neMetropolitan yakadzoserwa kwemwedzi miviri. Nepo Şefkat Evleri inosanganisirwa muchirongwa che disinawon zuva rega rega, iyo March yekutanga yeiyo Capital Theatre yakaendeswa kune yakazotevera nguva. Kuitira kudzivirira mapoka kuti arege kuitika uye kudzivirira kupararira kwehutachiona, mariro evagari nemariro anozoitwa pasina kumirira munamato wenguva. Metropolitan kuchenesa zvikwata; Inoenderera mberi nemabasa ayo ekuuraya hutachiona mumamuseum, masangano ezvehutano, dzimba dzekunzwa, masangano asiri ehurumende, masangano eruzhinji, dzimba dzevevakoti, nzvimbo dzekuriritira vakwegura, makirabhu emitambo, minibus uye matekisi.
Metropolitan Municipality yave kungwaririra nechero zvikamu nekuda kwekubuda kwe coronavirus.
Health Coordination Board, iyo yakagadzwa ichitungamirwa neMutevedzeri woMunyori Mukuru, Mustafa Kemal Çokakoğlu maererano nekurairwa kweMetropolitan Meya Mansur Yavaş, inotevera kusavimbika uye zvidzidzo zve sterilization 7/24. The Metropolitan Municipality, inotarisa pane zvehutsanana zviitiko, inounza matanho matsva rimwe ne rimwe.
KUSVIRA KWEMALIZO Kubva kuPRESIDENT YAVAŞ KUSHANDIRA MABHUKU
Metropolitan Municipality, iyo inoyambira vagari kuburikidza nemaficha emadhorobha, mabhana nemabhodhi, kusanganisira nhoroondo dzemagariro enhau, iri kuenderera mberi nekuita matanho matsva mukurwisa denda.
Ankara Metropolitan Meya Mansur Yavaş akazivisa nechiziviso chake kubva kuaccount yenhoroondo yake kuti zvakatorwa kubva kumabhizinesi aive neMetropolitan zvakamiswa kwemwedzi miviri. Nechisarudzo chakatorwa, rovedzo yakapihwa kumabhizinesi emari yeMetropolitan Municipality nemakambani ekubatana pamwe nemakambani, ayo aanetseka mukubhadhara.
NYAYA DZVAKAVANYA NEZVISANGANO ZVAKAITWA
Guta Guru, iro rinowedzera hutsanana hutano hweveruzhinji; yaisanganisira Dzimba Dzemhirizhonga muEtlik, Ruzgar, Varlik, Ulus uye Oncology, panogara varwere nehama dzavo, mupurogiramu yavo yezuva nezuva yekusazvibata.
Ipo mari dzekutanga dzeInternet Theatre dzichiiswa kune imwe nguva inotevera, matanho matsva ari kuitwa kudzivirira mapoka kuti asatange uye kuparadzira hutachiona. Mota dzemariro dzichirikuitwa disin disin, mariro anozovigwa vasina kumirira nguva yemunamato, zvinoenderana nezvikumbiro zvevagari vemariro.
KUSVEDZESA UYE KUKUNDA ZVINOPfuurira 7/24
Dziviriro Dziviriro uye Dhipatimendi Rokuchengetedza BELPLAS A.Ş. Pese zvikwata zvavo zvichiramba zvichishanda siku nesikati vachipfuura nemudhorobha, vanoitawo basa rekuuraya hutachiona mumotokari dzekufambisa veruzhinji, minibus uye ematekisi zuva nezuva.
Nechisarudzo cheBazi reNational Education, mushure mekutambiswa kwekudzidziswa pakati pa 16-30 Kurume, hushoma hwevanhu vanodzikira muMetro, ANKARAY, Teleferik uye EGO mabhasi, nepo EGO General Directorate inoenderera mberi nemuitiro wayo wezuva nezuva kunyanya mumangwanani nemanheru emabhazi ekushandira maawa nenhamba.
VaFaruk Kalender, nhengo yeBhodi yeGeneral Assembly of Chamber yeVashandi Vemotokari, uye Mota dzeA Ankara Umum, vakati "Tinotenda Dunhu redu uye neavo vakapa hutano hwevanhu vedu nevatyairi vatyairi". Ndatenda nebasa iri. "Tinofara zvikuru nemaitiro aya, atakaita nekufunga hutano hwedu nehutano hwevatengi vedu"
Kutenda meya weMetropolitan Meya Mansur Yavaş nebasa rekusimbisa marara rinoitwa panzvimbo dzinomira mabhazi, kunyanya muGüvenpark, Bentderesi uye Sincan, Sincan Chauffeurs uye Mutungamiriri weVemotokari Shamwari Isa Yalçın akati:
"Nekuda kwehurwere hwenyika, tiri panjodzi munyika yedu uye tinokoshesa zvikuru izvi. Dai Mwari vafadzwa naMayitropolitan Meya wedu. Motokari dzedu dzakanyatso disin disidhi. Izvi zvakakosha zvakanyanya maererano nehutano uye isu tichaita kuti hutachiona hwehutachiona huvepo. "
Ipo hutsanana huchishanda huchitungamirirwa neMetropolitan Municipality Police department zvikwata zvoenderera mberi; Kuraswa kwekuratidzira mamiyuziyamu, masangano ezvehutano, mahotera, dzimba dzekunzwa, zvivakwa zvemasangano asiri ehurumende, masangano eruzhinji, dzimba dzevevakoti, nzvimbo dzevakweguru uye makirabhu emitambo haana kurambwa. Urban Aesthetics Dhipatimendi zvikwata vanoita zvine hungwaru kuchenesa basa munzvimbo dzetsika uye nhoroondo, kunyanya mumigwagwa, migwagwa uye maboulevards, munzvimbo dzinozivikanwa nenzvimbo dzevaraidzo.
BTS's Coronation Call: 'Mazana ezviuru zvevanhu Vanotora nekukurumidza pakubata pane kufamba.
Nzira yeAsphalt Yakakonzerwa Nemakamuri MuGuta Yakasviba
Kuchenesa hutachiona kwakawedzera kaviri muMetro uye Ankaray Zviteshi muDhorobha
Paruzhinji Kutakura Mitero
Kubvisa Zvipingamupinyi Rimwe Neimwe Mutaundi
EGO Kadhi mu Capital ndiyo Born Electronic Smart Card System iri kuuya
Çuf Çuf Kemal Kubva ku Capital Capitalway Exhibition
Vakakanganwa zvinhu mubhasi uye zviteshi zvezvitima muhombe
Sincan-Kayaş commuter chitima basa yakatanga muhomwe
Elazig Municipality Inotangisa Zvigaro Zvekufambisa muPublic Transport
Midziyo yeDisinoseti Inoiswa Mumabhazi Mersin
Disinfection Service kubva kuKonya Metropolitan kuenda kuDolmuş, Commerce Taxi neMabasa
Mhinduro Yakasimba kubva kuOmamoğlu's Bhazi-Rakazadzwa Kambani “Damn Kana Zvematongerwo Enyika Izvi”
Coronavirus Kudzora kune Commerce Tekisi ne Ministry of Interior Circular